Izincazelo zeMeta: Konke Odinga Ukukwazi Nge-SEO
Kwesinye isikhathi abathengisi abakwazi ukubona ihlathi lezihlahla. Njengoba ukusebenzisa ngokugcwele injini uthole ukunakwa okukhulu kule minyaka eyishumi eyedlule, ngibonile ukuthi abathengisi abaningi bagxila kakhulu ezingeni nasekulandeleni kwe-organic organic, bakhohlwa isinyathelo empeleni esenzeka phakathi. Izinjini zokucinga zibaluleke kakhulu kuwo wonke amabhizinisi 'amandla okushayela abasebenzisi ngenhloso ekhasini elikusayithi lakho elinikeza injongo kumkhiqizo noma kusevisi yakho. Futhi izincazelo ze-meta yithuba lakho lokukhuphula amanani afanele wokuchofoza kusuka kunjini yokusesha uye ekhasini lakho.
Yini incazelo yeMeta?
Izinjini zokusesha zivumela abanikazi besiza ukuthi babhale izincazelo mayelana nekhasi elikhasiwe futhi lihanjiswe ezinjini zokusesha abazibonisayo ngaphakathi kwekhasi lemiphumela yenjini yokusesha (SERP). Izinjini zokusesha zisebenzisa izinhlamvu zokuqala eziyi-155 kuya kwezingu-160 zencazelo yakho ye-meta ukuthola imiphumela yedeskithophu futhi zinganciphisa izinhlamvu ezingama- ~ 120 zabasebenzisi benjini yosesho lweselula. Izincazelo ze-meta azibonakali kumuntu ofunda ikhasi lakho, kubakhasi abangaphansi.
Incazelo ye-meta iku- isigaba se-HTML futhi simiswe ngendlela elandelayo:
Igama="incazelo" sokuqukethwe="Ukushicilelwa okuhola phambili komkhakha weMartech wokucwaninga, ukuthola, nokufunda ukuthi ungawasebenzisa kanjani amapulatifomu okuthengisa nawokumaketha nobuchwepheshe ukukhulisa ibhizinisi lakho."/>
Isetshenziswa Kanjani Incazelo Ye-Meta Kumazwibela?
Ake sibheke lokhu kusuka emibonweni emibili ehlukene… injini yokusesha kanye nomsebenzisi wokusesha:
Injini yokusesha ithola ikhasi lakho, kusuka kusixhumanisi sangaphandle, isixhumanisi sangaphakathi, noma imephu yakho yesayithi njengoba ikhasa iwebhu.
Injini yokusesha ikhasa ikhasi lakho, inake isihloko, izihloko, izimpahla zemidiya, nokuqukethwe, ukuthola amagama angukhiye ahambisana nokuqukethwe kwakho. Qaphela ukuthi angizange ngiyifake incazelo ye-meta kulokhu… izinjini zokusesha azifaki umbhalo encazelweni yemeta lapho uthatha isinqumo sokukhomba ikhasi.
Injini yokusesha isebenzisa isihloko sekhasi lakho ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha (serp) ukungena.
Uma unikeze incazelo ye-meta, injini yokusesha ikushicilela lokho njengencazelo ngaphansi kokufaka kwakho kwe-SERP. Uma ungazange unikeze incazelo ye-meta, injini yokusesha ikhomba umphumela ngemisho embalwa abayibona ifanelekile ngaphakathi kokuqukethwe yikhasi lakho.
Injini yokusesha inquma ukuthi ulibeka kanjani ikhasi ekhasini ngokuya kokuhlobana kwesayithi lakho kusihloko nokuthi zingaki izixhumanisi ezifanele isayithi lakho noma ikhasi elibekwe kuzo ngokwemigomo abakukhombe yona.
Injini yokusesha may futhi ikukala ngokususelwa ekutheni abasebenzisi bosesho abachofoze ngomphumela wakho we-SERP bahlala kusayithi lakho noma babuyela ku-SERP.
Umsebenzisi wokusesha ufaka amagama asemqoka noma umbuzo enjini yokusesha bese uhlala ku-SERP.
Imiphumela ye-SERP yenziwe yaba ngeyakho uqobo, uma kungenzeka, kumsebenzisi wenjini yokusesha ngokuya ngejografi yabo kanye nomlando wabo wokusesha.
Umsebenzisi wokusesha uskena isihloko, i-URL, nencazelo (ethathwe encazelweni yemeta).
Amagama angukhiye umsebenzisi wenjini yokusesha asetshenzisiwe aqokonyiswa ngaphakathi kwencazelo kumphumela we-SERP.
Ngokuya ngesihloko, i-URL, nencazelo, umsebenzisi wokusesha unquma ukuthi achofoze isixhumanisi sakho noma cha.
Umsebenzisi ochofoza kusixhumanisi sakho ufika ekhasini lakho.
Uma leli khasi lifanele futhi lihambisana nesihloko ekuseshweni abekwenza, bahlala ekhasini, bathole imininingwane abayidingayo, futhi bangaguqula.
Uma leli khasi lingahambelani futhi lingundaba mlonyeni ekufuneni ababekwenza, babuyela ku-SERP bese bachofoza kwelinye ikhasi… mhlawumbe esincintisana nabo.
Ingabe izincazelo zeMeta Ziyayithinta Imingcele Yosesho?
Lowo ngumbuzo olayishiwe! Google kumemezela ngoSepthemba ka-2009 lezo zincazelo ze-meta noma amagama angukhiye we-meta afaka ama-Google ama-algorithms wezinga ngokuseshwa kwewebhu… kepha lowo ngumbuzo oqondile odinga ingxoxo eyengeziwe. Ngenkathi amagama namagama abalulekile ngaphakathi kwencazelo yakho ye-meta engeke akuthole ukalwe ngqo, anomthelela ekusebenzeni kwabasebenzisi benjini yokusesha. Futhi ukusebenza komsebenzisi wenjini yokusesha kubaluleke kakhulu ekulinganisweni kwekhasi lakho ngomphumela wokusesha osebenzayo.
Iqiniso liwukuthi, lapho abantu abaningi abachofoza ekhasini lakho bekhulisa amathuba okuthi bafunde futhi babelane ngaleli khasi. Amathuba amaningi okuthi bafunde futhi babelane ngekhasi, ngcono izinga lakho. Ngakho-ke ... ngenkathi izincazelo ze-meta zingathinti ngqo ukubekwa kwekhasi lakho ezinjinini zokusesha, zinomthelela omkhulu ekuziphatheni komsebenzisi… okuyisici esiyisisekelo esiyisisekelo!
Incazelo Ye-Meta Isibonelo
Nasi isibonelo sokucinga, se- martech:
Ngikhombisa lesi sibonelo ngoba uma umuntu avele asesha i- "martech", angavele abe nentshisekelo yokuthi yini i-martech, hhayi ukuthi afunde kabanzi ngayo noma athole incwadi. Ngiyajabula ukuthi ngikhona lapho phezulu emiphumeleni ephezulu futhi angikhathazeki kakhulu ukuthi ukuthuthukisa incazelo yami ye-meta kuzoholela ekubonakaleni okukhulu.
Inothi eseceleni: Anginalo ikhasi elibiziwe yini i-martech? Lokho mhlawumbe kuyisu elihle kimi lokuphaka eyodwa ngoba sengivele ngiphakamise phezulu kuleli themu.
Kungani iMeta Incazelo Ibalulekile Kumasu Wokusesha we-Organic?
Injini yokusesha - izinjini zokusesha zifuna ukuhlinzeka abasebenzisi bazo ngomuzwa ophakeme nemiphumela yokusesha esezingeni eliphakeme kakhulu. Njengomphumela, incazelo yakho ye-meta ibalulekile! Uma ukukhuthaza ngokunembile okuqukethwe kwakho ngaphakathi kwencazelo yakho ye-meta, khohlisa umsebenzisi wenjini yokusesha ukuthi avakashele ikhasi lakho, futhi uwagcine lapho… izinjini zokusesha zizethemba kakhulu ezingeni lakho futhi zingaze zikhuphule izinga lakho uma amanye amakhasi abekwe kakhulu aholela kubasebenzisi ababhampayo .
Sesha Abasebenzisi - ikhasi lomphumela wenjini yokusesha elinombhalo ongahleliwe ofakwe ngaphakathi kokuqukethwe yikhasi kungenzeka lingahehi umsebenzisi wenjini yokusesha ukuthi achofoze ekhasini lakho. Noma, uma incazelo yakho ingahambelani nokuqukethwe yikhasi, bangadlulela kokulandelayo kwe-SERP.
Ukwenza ngcono incazelo ye-meta kuyinto kakhulu isici esibalulekile se-SEO esekhasini ngezizathu ezimbalwa:
Okuqukethwe okuphindwe kabili - izincazelo ze-meta zisetshenziswa ekunqumeni ukuthi unayo noma cha phinda okuqukethwe ngaphakathi kwesayithi lakho. Uma i-Google ikholelwa ukuthi unamakhasi amabili anokuqukethwe okufana ncamashi nezincazelo ezifanayo ze-meta, ngokunokwenzeka bazolinganisa ikhasi elihamba phambili futhi bangakunaki konke okunye. Kusetshenziswa izincazelo ze-meta ezihlukile kuwo wonke amakhasi kuzoqinisekisa ukuthi amakhasi awakhasi futhi anqunyelwe ukuthi abe okuqukethwe okuphindiwe.
Keywords - Ngenkathi Keywords isetshenziswe ku- izincazelo zemeta ungathinti ngqo isikhundla sekhasi lakho, kepha kunjalo isibindi kumiphumela yosesho, ukunaka umphumela othile.
Amanani wokuqhafaza ngokuchofoza - Incazelo ye-meta ibalulekile ekuguquleni umsebenzisi wenjini yokusesha abe isivakashi sesiza sakho. Sisebenzisana namakhasimende ukuqinisekisa ukuthi izincazelo zawo ze-meta ziyenga kakhulu umsebenzisi wenjini yokusesha, ngokusetshenziswa kwamagama asemqoka njengokugxila kwesibili. Kuyalingana ne-pitch yakho ukushayela umuntu ukuthi athathe isenzo.
Amathiphu Wokuthuthukisa Incazelo Ye-Meta:
Ubungqabavu kubalulekile. Ngosesho lweselula olwandayo, zama ukugwema izincazelo zemeta ezingaphezulu kwezinhlamvu eziyi-120 ngobude.
Gwema izincazelo zemeta eziphindiwe ngaphesheya kwesayithi lakho. Yonke incazelo ye-meta kufanele yehluke, uma kungenjalo injini yokusesha ingayiziba.
Sebenzisa ukuphrinta lokho kwenza umfundi afune ukwazi noma lokho kuyala isenzo sabo. Inhloso lapha ukushayela umuntu ukuthi achofoze afike ekhasini lakho.
Gwema i-linkbait izincazelo ze-meta. Abasebenzisi abakhungathekisayo ngokubenza bachofoze futhi bangalutholi ulwazi oluchazile kuyisenzo esibi sebhizinisi esizolimaza ikhono lakho lokubandakanya nokuguqula izivakashi zenjini yokusesha.
Nakuba Amagama angukhiye ngeke zisize ngokuqondile isikhundla sakho, kepha zizosiza isilinganiso sakho sokuchofoza ngoba amagama angukhiye aqokonyiswa njengoba umsebenzisi wenjini yokusesha efunda imiphumela. Zama ukusebenzisa amagama angukhiye eduze kwamagama okuqala encazelweni ye-meta.
Gada kokubili isikhundla sakho nokuchofoza kwakho amazinga… futhi ulungise izincazelo zakho ze-meta ukuze wandise ithrafikhi efanelekile nokuguqulwa! Zama ukuhlolwa kwe-A / B lapho uvuselela khona incazelo yakho ye-meta inyanga bese ubona ukuthi ungakhuphula yini ukuguqulwa.
Uhlelo lwakho Lokulawulwa Kokuqukethwe kanye Nezincazelo Ze-Meta
Noma usebenzisa i-squarespace, i-WordPress, i-Drupal, noma enye CMS, qiniseka ukuthi banekhono lokushintsha incazelo yakho ye-meta. Ezingxenyeni eziningi, inkambu yencazelo ye-meta ayicaci kangako ngakho-ke kungadingeka ukuthi uyifune. Okwe-WordPress, Isikhundla Math nguwethu isincomo futhi inikeza umsebenzisi ukubuka kuqala okuhle kwencazelo ye-meta njengoba ibukwa kwideskithophu noma kuselula.
Ngaso sonke isikhathi uma ushicilela ikhasi noma ufisa ukulilungiselela, ngizosebenzisa ngokugcwele incazelo ye-meta ngaphakathi kwenqubo ukuze ukhuphule amanani akho okuchofoza futhi ngiqhubekisele phambili abasebenzisi benjini yosesho ebhizinisini lakho.
Tags: isixhumanisi sokubambisanaisilinganiso sokuchofozaphinda okuqukethweyinde kangakanani incazelo ye-metazingaki izinhlamvu incazelo yemetaUkusetshenziswa kwegama elingukhiyeAmagama angukhiyeincazelo metaubude bencazelo yemetaizincazelo zemetaamagama angukhiye we-metainyokaamathiphu wokusebenzisa kahle izincazelo ze-meta
Aug 14, 2010 ku-8: 57 AM
Isiphakamiso esihle. Elinye lamathuluzi engiwathandayo e-WordPress All-in-One SEO lisivumela ukuthi sidale izindlela ezilula zekhasi nezincazelo ngaphandle kokwazi okuningi ngokufaka amakhodi. (By the way, usethule ku-All-in-One) ngakho-ke ngiyabonga kuzo zombili izibalo.
Aug 14, 2010 ku-11: 23 AM
I-Lorraine, i-AIOS ne-Google XML Sitemaps yizinto zami ezimbili okufanele 'ube nazo' nganoma yisiphi isiza se-WordPress. Kuyangimangaza ukuthi i-WordPress ayizifakanga nje kwikhodi eyinhloko kuleli phuzu. I-WordPress ikuthola kuphela cishe ngama-75% lapho…. lawo ma-plugins enza ipulatifomu yakho inikwe amandla ngokugcwele!
May 17, 2013 ku-2: 41 PM
Okuthunyelwe okumangalisayo njengokujwayelekile! Bengikhuluma ngalokhu ekuqaleni kwesonto neqembu. Ngiyabonga uDoug.
May 17, 2013 ku-2: 44 PM
Ngiyabonga @jrdorkin: disqus!
May 18, 2017 ku-6: 35 PM
Ngingamangala ngokuphelele ukuthola umuntu ojulile ngokuthuthukisa okuqukethwe kwakhe kuwebhusayithi engenayo incazelo ye-meta. Uma ngisebenza nabantu ngibatshela ukuthi incazelo ye-meta ingumzimba wesikhangiso sabo esihlukaniswe ku-Google. Ungazama ukuthengisa okuthile ephephandabeni lakho ngaphandle kwencazelo yento leyo? Vele akunjalo!
May 19, 2017 ku-8: 29 AM